कहिले बाँडिएला समाज लघुवित्तकाे आइपिओ ? - DURBAR TIMES
HomeEconomyकहिले बाँडिएला समाज लघुवित्तकाे आइपिओ ?
कहिले बाँडिएला समाज लघुवित्तकाे आइपिओ ?
काठमाडौं : समाज लघुवित्त वित्तीय संस्थाको आइपीओ सोमबारभित्र बाँडफाँट हुने भएको छ । बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटलका अनुसार छिटोमा आइतबार त्यो सम्भव नभए सोमबार हुनेछ । धितोपत्र बोर्डबाट अन्तिम स्वीकृति आउन बाँकी रहेको क्यापिटलको भनाई छ । समाजको आइपीओमा कुल १ अर्ब १९ करोड ६२ लाख ७० हजार रुपैयाँ बरारको आवेदन परेको छ । जसमा ५ लाख ६३ हजार ९९८ जनाले १ करोड १९ लाख ६२ हजार ७०० कित्ताका लागि आवेदन दिएका छन् ।
यो सर्वसाधारको लागि बिक्री खुला गरिएको ८० हजार ७०० कित्तालाई आधार मान्दा १४८.२३ गुणा बढी आवेदन हो । यसर्थ, समाजको आइपीओमा माग भन्दा बढी आवेदन परेकाले सेयर पाउन भने भाग्यमै पर पर्नुपर्नेछ । गोलाप्रथाबाट सेयर बाँडफाँट हुनेछ । समाजले भदौ ४ गतेबाट ८६ लाख रुपैयाँ बराबरको ८६ हजार कित्ता आइपीओ बिक्रीमा ल्याएको हो ।
रिलायन्सको रिजल्ट सार्वजनिक पुरा लिस्ट सहीत हेर्नुहोस् (हेर्ने बिभिन्न तरिका)
दरबार टाईम्समा तपाईंलाई स्वागत छ कृपया यस लिन्कमा दिइएको फाइलमा आफ्नो नाम खोज्नसक्नुहुन्छ! अहिले विभिन्न माध्यममा धेरै ग्राहकका कारण चाप ज्यादा हुँदा सर्भर डाउन हुनेसमस्या भएका कारण हामीले गूगलको पावरफुल सर्भर मार्फत यहाँहरुले रेसुल्त हेर्नमिल्ने बातावरण बनाएका छौं । प्रयोग गर्ने तरिका ? * कृ…
यसमध्ये १ हजार कित्ता अर्थात जारी पुँजीको ५५ कर्मचारीहरुका लागि र कुल निष्कासनको ५५ अर्थात ४ हजार ३ सय कित्ता सेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको थियो । सर्वसाधारणले बाँकी रहेको ८० हजार ७ सय कित्ताका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था थियो । २०६८ साल फागुन २५ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको समाज लघुवित्तको केन्द्रीय कार्यालय सिराहमा छ ।
काठमाडौं : लिवर्टी इनर्जी कम्पनीको आइपीओ सोमबार (भदौ १५ गते) बाँडफाँट हुने भएकोछ । बिक्री प्रबन्धक एनआइबीएल एस क्यापिटलका अनुसार आफ्नै कार्यालय लाजिम्पाटकाठमाडौंमा बिहान १० बजे आइपीओ बाँडफाँट हुने कार्यक्रम तय भएको छ । बाँडफाँटफेसबुक लाइभबाट पनि देखाइने बिक्री प्रबन्धकले जनाएको छ । लिवर्टी इनर्जी…
Previous articleप्रदेश नं ५ मा सङ्क्रमित छ हजार
Next articleबाली जोगाउन रातभर जाग्राम